Estonia sy Georgia dia mizara ny fahaizany mifehy ny e-governance amin'ny Karaiba
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Estonia sy Georgia dia mizara ny fahaizany mifehy ny e-governance amin'ny Karaiba
Janoary 12, 2018
Ny hetsika dia hamorona governemanta Karaiba tsy misy fotony mifototra amin'ny olom-pirenena ary hanova ny sehatra ho an'ny daholobe.
Raha ny vinan'i Karaiba ho an'ny Governemanta taonjato faha-21, Estonia dia ohatra tsara amin'ny mety hanovana governemanta sy firenena. Miaraka amin'ny isan'ny mponina 1.3 tapitrisa, i Estonia dia isan'ny mpitarika ambony indrindra eran-tany amin'ny fampandrosoana ny e-governemanta manana 99% -n'ny serivisy ho an'ny daholobe azo jerena amin'ny 24/7.
Firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana, tamin'ny 1997 Estonia dia nanomboka ny diany nanangana sy namorona fiarahamonina nomerika misokatra amin'ny alàlan'ny fampiasana mahomby ny teknolojia fampahalalana sy fifandraisana (TIC). Miorina amin'ny finiavana politika hanatsarana ny fifaninanam-panjakana, hampisondrotra ny fahasambaran'ny olony, ary hanangana ekosistia nomerika mahomby, azo antoka, azo idirana ary mangarahara, Estonia dia lasa iray amin'ireo firenena mandroso indrindra amin'ny haitao sy haitao indrindra ao amin'ny izao tontolo izao.
Iray amin'ireo mampiavaka ny rafitry ny e-governemanta eto amin'ny firenena ny fanomezana karapanondrom-pirenena amin'ny olom-pirenena mamela ny fidirana nomerika amin'ny e-serivisy rehetra ao Estonia, izay misy, saingy tsy ferana amin'ny, hetra, lisitra fandraharahana, e -sekoly, e-preskripsi, e-monina, e-banking ary e-fahasalamana. Ny sakan'ny e-serivisy dia nahatonga ny fitehirizana fotoana sy ny fahombiazan'ny vidiny.
Toa an'i Estonia, i Georgia koa dia naneho fahombiazana tamin'ny fanovana ny governemanta sy ny fireneny tamin'ny fampiasana ny TIC. Miaraka amin'ny isan'ny mponina 3.7 tapitrisa dia nanomboka ny iraka hanamafisana sy hampivoarana ny serivisy e-governemanta ny Governemanta any Georgia. Ity hetsika ity dia nanatsara be ny fidirana amin'ny e-serivisy ho an'ny orinasa sy ny olom-pirenena ary nanamafy ny fitantanana, indrindra ny mangarahara.
Ny Governemantan'i Antigua sy Barbuda ary ny Union Telecommunications Union (CTU), niara-niasa tamin'ny Caribbean Center for Development Administration (CARICAD), dia nanomana fihaonambe an-tampon'ny Symposium hanombohana hetsika ho an'ny Governemanta taonjato faha-21. Ny hetsika dia hamorona governemanta Karaiba tsy misy fotony mifototra amin'ny olom-pirenena ary hanova ny sehatra ho an'ny daholobe. Ny Vovonana, izay hatao amin'ny 16 Janoary, dia hanazava ny fitsipiky ny Governemanta taonjato faha-21 amin'ireo Lehiben'ny governemanta Karaiba ary hanolotra drafitra izay hitarika amin'ny fanovan'ny governemanta. Ny minisitry ny raharaham-bahiny any Estonia teo aloha, Andriamatoa Rein Lang, izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fanovana ny e-governemanta Estonia, ary ny minisitry ny fitsarana any Georgia ankehitriny, Ramatoa Thea Tsulukiani dia hizara ny fomba fijeriny ny amin'ny fomba nahombiazan'ny firenenan'izy ireo tamin'ny fampiasana ny TIC hanovana ny fizotran'ny governemanta.
Symposium mandritra ny telo andro, natao hanomanana ireo mpiasan'ny sehatry ny daholobe amin'ny asa tokony hatao mba hananganana Governemanta taonjato faha-21, dia hanaraka ny Vovonana hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 19 Janoary. Vokatra lehibe iray an'ny Symposium dia ny fanomanana ny rafitra hanafainganana ny asa fanompoana e-governemanta, ny fanovana ny governemanta Karaiba ary ny fanatsarana ny fifaninanana any amin'ny faritra.
I Estonia sy i Georgia dia mitovy amin'ny firenena Karaiba satria firenena kely misy mponina kely izy ireo. Ny ekonomikan'izy ireo malemy dia nohatanjahina satria nandray ny TIC izy ireo ary nanova ny governemantany. Ny zavatra niainany dia nanaporofo fa ny tsy fahampian'ny habe na ny enti-manana dia tsy sakana amin'ny fampandrosoana. Afaka manome fanantenana i Karaiba fa ny fahombiazana mitovy amin'izany dia azo tanterahina satria ny haben'ny habeny dia manome antsika ny fahaizany mandahatra, manitsy ary manamboatra firenena iray manontolo, izay misy ny governemanta, ny olom-pirenena ary ny orinasa. Ny hetsika ataon'ny Governemanta taonjato faha-21 dia ny programa Karaiba hanatanterahana izany. Ny fandraisana andraikitra dia mitaky fanovana ny fisainana efa misy izay tsy maintsy manomboka amin'ny sehatra avo indrindra sy ny finiavana politika. Noho izany, ireo Lehiben'ny governemanta Karaiba dia tsy maintsy tonga tompon-daka amin'ny fandaharam-potoanan'ny Governemanta faha-21.
Lehiben'ny governemanta maromaro no nanaiky ny fanasana hanatrika ny Vovonana. Ny minisitra ny TIC sy ny fitantanan-draharaham-panjakana miaraka amin'ireo sekreterany maharitra sy ny technocrats-ny; Mpikirakira sy mpandrindra ny tambajotra ICT; Ireo masoivoho misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena sy ny orinasa dia hanatrika ny Symposium.
Nijanona ny fikosoham-bary: nanohitra ny rafitry ny fitaterana renivohitra Gresy ny hetsi-bahoaka
Ny nosy Karaiba miavaka dia manantena ny hahatongavany any THE Royal honeymoon